Ii-FAQs-Hangzhou Viewsheen Technology Co., Ltd.
Kuthekani ukuba ndilibele igama lokugqithisa lekhamera?
Igama lokugqithisa linokufunyanwa ngokusebenzisa isixhobo sethu sokulawula isixhobo.
Nceda uqhagamshelane nathi ngeenkcukacha sales@viewsheen.com
Amaxabiso ethu axhomekeke ekutshintsheni ngokuxhomekeke kubonelelo kunye neminye imiba yemarike.Siza kukuthumelela uluhlu lwamaxabiso oluhlaziyiweyo emva kokuba inkampani yakho iqhagamshelane nathi ngolwazi oluthe kratya.Sikubonelela ngenkxaso yexabiso elikhuphisanayo.
Hayi, asinayo iodolo encinci.
Kungakhathaliseki ukuba zininzi kangakanani, siya kubonelela ngenkxaso yobugcisa kuwe.
Ewe, sinokubonelela ngamaxwebhu amaninzi aquka iprothokholi yonxibelelwano, uxwebhu lwesakhiwo, isikhokelo sokusebenzisa.
Siqinisekisa itekhnoloji yethu, izixhobo kunye nenkqubo yemveliso.Ukuzinikela kwethu kukwaneliseka kwakho ngeemveliso zethu.Kwiwaranti okanye hayi, yinkcubeko yenkampani yethu ukujongana nokusombulula yonke imiba yabathengi ukuze wonke umntu aneliseke.
Ewe, sihlala sisebenzisa umgangatho ophezulu wokupakisha ngaphandle.Ukupakishwa kweengcali kunye neemfuno zokupakisha ezingezizo ezisemgangathweni zingafaka intlawulo eyongezelelweyo.
30x Zoom Camera Mdule Ikhamera yokwandisa ixesha elide Ikhamera yobushushu Imodyuli yeKhamera yokwandisa iNethiwekhi Ikhamera yeMax yeOptical Zoom imodyuli yekhamera yokusondeza